Ningax isku xira dalooliyo is used with low voltage ABC cables with insulated aluminum conductors up to 6 KV.
IPC soo socda ayaa kala duwan ballaaran ee qalabka ka badan oo kale oo Jera ee IPC.
isku xira Tani waa mid aad raagaya iyo sahlan loogu rakibo ee khadadka guraa anteenada, hillaac waddooyinka iyo dhismayaasha. Uma baahna labeen silicone, waterproofed.
Ku haboon kirishbooyada weyn ama laan la aluminium ama copper silig ka dhigeen, oo waxaa laga dalbadaa in rakibaadda dusha, inta lagu guda jiro connective macmiilka danab yar yahay.
line Main, mm2
Adkaynaya, N * m
Rakibaadda of this isku xira danab ku yar waa mid aad u fudud sababtoo ah kooxda ugu hooseysa waslad, taas oo ku haboon yahay u qardarin by kiyaawo.
Danab dahaaran Xidhiidhiyayaasha dalooliyo Low ku baasay tijaabooyin sida ay EN 50483, waayo-aragnimo hawlgalka la kul min - 60 ° C ilaa imtixaanka +60 ° C, imtixaanka baaskiil heerkulka, da 'baaritaanka, baaritaan iska caabin ah daxalka iwm
IPC ka samaysan yihiin UV thermoplastic adkaysta, ayaa waxa daasadda daboolay ilkaha, iyo hardware ahama
macaamiisheena ayaa cadeeyay tayo sare of this LV ABC habboon.
Xidhiidhiyayaasha kale dalooliyo oo danab hooseeyo rakiban cablewaxaa laga heli karaa mid si gooni gooni ah ama si wadajir ah sidii shirka.
Waxaan leenahay kit oo dhan accessories cable u baahan yihiin this.
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir in ay macluumaad dheeraad ah
Previous: fur barroosinka nooca pigtail PS-7
Next: Eye habboona xeeraan-16 insulator
isku xira dalooliyo dahaaran
Dahaaran dusaya isku xira ZOP-52
Ningax isku xira dalooliyo
danab hooseeyo rakiban cable
Danab dahaaran Xidhiidhiyayaasha dalooliyo Low
danab hooseeyo connective macmiilka